Dalka kamidka ah Yurub ee ogalaaday in lagu tagi karo Baasaboorka Somalia ? | Arrimaha Bulshada
Home News Dalka kamidka ah Yurub ee ogalaaday in lagu tagi karo Baasaboorka Somalia ?
Dalka kamidka ah Yurub ee ogalaaday in lagu tagi karo Baasaboorka Somalia ?
Bulsha:- Safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka ah Soomaaliya ee Belgrade Serbia ayaa si rasmi ah u gudbisay Muunadda saxda ah ee Baasaboorka Soomaaliya.
Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadaha Dowladda Federalka ah ee Soomaaliya ayaa uga mahad celisay Safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka ah Soomaaliya ee Belgrade iyo Diplomaasiyiinta howshan fududeeyay.